Fitaovana fanangonam-bidy amin'ny votoatiny
Fifanarahana marobe: Fitaovana hampiasana ny fanamafisana ny atiny
Asabotsy, Aogositra 4, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny sasany aminareo dia mety manontany tena hoe inona ny atin'ny atin'ny atiny. Misy atiny mampihomehy iray navoaka tao amin'ny Internet tamin'ny alàlan'ny Twitter, Facebook, bilaogy, vaovao, Youtube ary mpampita vaovao hafa. Ny mety dia manan-danja amin'ny mpihaino anao ny sasany amin'ireo atiny ireo - saingy mila vitsivitsy izany famakafakana, sivana ary fampisehoana amin'ny fomba mahasoa. On Martech Zone, mikarakara atiny betsaka izahay. Ohatra iray amin'izany ny infografika. Na dia mahita taonina iray aza izy ireo dia mitandrina izahay amin'ny famerenana, ny sivana, ny famakafakana ary ny fanazavàna ny antony ampiharan'izy ireo amin'ny mpihaino antsika sy ny mety ho hevitray.
Ny fanitsiana ny atiny dia mety hanampy betsaka amin'ny marika sy ny fanovana ny tranokalanao ihany koa. Alao an-tsaina ange raha afaka mampiditra fahana mivantana fanehoan-kevitra sosialy, tsikera ary sioka ao amin'ny pejy fandraisam-bahininao avy amin'ny mpanjifa faly amin'ny fotoana tena izy Votoatiny sarobidy izany… ary angamba misy fiatraikany lehibe kokoa noho ny tsangan-kevitry ny fijoroana vavolombelona na ny logo an'ny mpanjifa. Mila fitaovana famoronana atiny izany.
Ny hetsiky ny fananganana atiny dia mazoto be. Ao anatin'ny biraonay ihany dia mamaky loharanom-baovao marobe isan'andro izahay rehetra, manana fanaraha-maso ara-tsosialy manosika vaovao momba anay momba ny mpanjifanay sy ny mpifaninana aminy ary ny fanairana Google manara-maso lahatsoratra vaovao amin'ny alàlan'ny tranonkala. Miasa mafy izahay handrahoana ny tsirairay amin'ireto loharano ireto ao anaty sombin-fampahalalana fohy izay azonay alefa amin'ny mpanjifanay mba hitazomana ny toetr'izy ireo momba ny raharaha. Mila fitambarana saina sy traikefa ary teknolojia izy io vao vita tsara… ary dingana mihetsika izay miova hatrany.
Ohatra iray lehibe amin'ny fanolokoloana votoaty ny fomba famoahan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra vaovao farany izay mety ho tian'ny mpijery azy. Tsy tsotra ny fizotrany - mila misy ifandraisany, tsy manafintohina ary mampiala voly ireo bitsika.
Fifanarahana faobe dia sehatra mifototra amin'ny rahona izay ahafahan'ny mpivarotra sy ny haino aman-jery mifehy ny atiny maro be ary mampiasa azy io ho an'ny mpihaino azy manokana. Ny sehatra Mass Relevance dia misintona atiny mifandraika amin'izany avy amin'ny Twitter sy tambajotra sosialy hafa, manivana ny resaka nalaina tamin'ny fitsipika nofaritan'ny mpampiasa, ary mamorona sary ho an'ny mpivarotra hiditra ao amin'ny tranonkala, ary ampidirina amin'ny fampiharana finday, aseho amin'ny efijery TV, apetaho amin'ny toerana fivarotana , na manao zavatra hafa.
Fifanarahana faobe manolotra ny mpivarotra andiana fitaovana na module efa namboarina, izay miasa na tsy miankina miaraka amina mpampiasa interface manokana, na ao anatin'ny sehatra lehibe kokoa manambatra modely roa na maromaro.
Ireo fitaovana na modely aroso dia misy:
Vokatra fanamafisana toa ny Fanisana faobe hisambotra naoty navoakan'ny kintana ary Fanehoan-kevitra faobe hisambotra fizarana ara-tsosialy.
Vokatra fifamofoana toy ny Fironana faobe izay sary an-tsaina ny fironana amin'ny asa sosialy, Riaka be izay manatsara ny resaka ara-tsosialy ary mifantina ny fampisehoana mety, Galerie Mass izay mamorona rindrina sary mifandraika misy sary avy amin'ny riaka sosialy samihafa, Mass Leaderboard izay manome laharana ara-tsosialy ary hampiroborobo ny vondrom-piarahamonina mpihaino mavitrika indrindra, Sarintany marobe izay mampiseho ny atiny sosialy araka ny toerana misy anao, Kaonteram-be izay manazava ny habetsaky ny hetsika sosialy mitranga.
Vokatra fifandraisana toy ny Valiny faobe izay mamela ny mpivarotra mandefa mivantana amin'ny mpihaino sy mifehy ny ony valiny ary Poll izay mamela ny fifidianana ara-tsosialy.
Fifanarahana faobe manolotra ireto vahaolana vonona vita manaraka ireto manambatra ny iray na maromaro amin'ireo fitaovana etsy ambony:
Companion izay manambatra atiny mavitrika manerana ny media sosialy.
mpitarika izay manangona ny atiny sosialy amin'ny lohahevitra na vokatra iray.
Ny ondry aman'osy-To-hamaha hanomezana atiny manokana azo alefa amin'ny alàlan'ny fandraisana anjaran'ny fiarahamonina
Zeitgeist tabilao maro sosona izay manome ny totalin'ny asa sosialy rehetra amin'ny fomba voarindra sy mora fehezina
mampiasa Fifanarahana faobe, ny mpivarotra dia afaka mifehy na mampandeha ny zavatra rehetra mitranga mifandraika amin'ny marika amin'ny habaka media sosialy. Ny tombotsoan'ny fampidirana ampitaina amin'ny mpanjifa sy ny vinavina dia manatsara ny zavatra niainany ary manome sakany ho an'ny fifamatorana tsara kokoa.
Tags: curationcurationfifandraisan'ny besinimarotwitter curation
Fanakalozam-bola momba ny varotra blur: Pitch, Find, Execut
Fahadisoana no fahavalonao SEO